Shirkii Nobel 17aad wuxuu ku nuuxnuuxsaday waxbarashada nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
October 10, 2019 Warbixinnada Waxqabadka, Warar & Muuqaal 1
Markay Noloshii Nabadda ee Nobel kulmaan.
Shirkii Nobel 17aad. Calaamaddaada nabad ka dhig!
(Waxaa daabacay: Xafiiska Nabadda Caalamiga. Oktoobar 2019)
Waxaa qoray Ingeborg Breines, Xafiiska Nabadda Caalamiga
Shirkii ugu horreeyay ee Nobel waxaa la abaabulay 20 sano ka dib, oo uu bilaabay Mikhail Gorbachev oo leh ilo ka socda Abaalmarinta Nabadda ee Nobel, oo uu kasbaday 1990. Abaal-marinnada nabadda ee Nobel ayaa la kulmay ku dhowaad sannad kasta tan iyo markaas, si loo xoojiyo ka qayb qaadashadooda nabadda, si looga wada hadlo su'aalaha mowduucyada danaynaysa nabadda adduunka iyo soo jeedinta waxqabad. Talooyin adag ayaa la soo saaray, oo aan ugu yaraan la xiriirin rabshad la'aan, hub ka dhigis nukliyeer iyo xiriirka ka dhexeeya nabadda iyo deegaanka. Eeg www.nobelpeacesummit.com. Shirka heerka sare wuxuu kaloo siinayaa kaqeybgalayaasha fursad ay kaga wada hadlaan mashruucyadooda socda isla markaana abuuraan isfaham qoto dheer, iskaashi iyo shabakado.
Shirweynihii 17-aad ee Nobel waxaa lagu abaabulay Mexico, 19. - 22. Sebtember sannadkan oo leh hal ku dhig Calaamaddaada ka dhig nabada. 30 abaalmarin ayaa la kulmay 10 qof iyo 20 urur. Waxaa laygu casuumay in aan kahadlo waxbarashada nabada, taas oo ahayd mowduuc sare sanadkan, laakiin aakhirkiina sidoo kale waxaan matalayay IPB tan iyo markii Lisa Clark, oo ila wareegtay aniga iyo madaxwaynaha IPB, daqiiqadii ugu danbaysay waa inay joojiso kaqaybgalkeeda.
Maaddaama kulanku uu ka dhacay Merida jasiiradda Yucatan, waxay ahayd wax dabiici ah in xaaladda Dadka Asaliga ah iyo waxa adduunku ka baran karo ay ahaayeen kuwo ajandaha ugu sarreeyay. Qaar ka mid ah 60% dadka degan Yucatan waxay leeyihiin awooweyaal Maya-Hindi ah. Cimilada iyo dhibaatada deegaanka, waxaa laga yaabaa inaan diyaar u nahay inaan si taxaddar leh u dhegeysanno xikmaddii hore ee Hindida Maya ee ku saabsaneyd xiriirka ka dhexeeya Hooyada Dunida iyo annaga, oo aan aragno cilaaqaadka dhow iyo isku tiirsanaanta aan u oggolaannay nafteenna inaan iska indhatirno muddo aad u dheer? Dhageysiga Rigoberta Menchu ​​Tum, Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee 1992, oo ka hadlaysa dhulka barakaysan ee dadka Maya oo ay aragtay sida ay uga dhex shaqeyso dadkeeda iyada oo leh xushmad, daryeel, jacayl, iyo dhiirigelin qoto dheer, ayaa ka mid ahayd waayo-aragnimadaydii ugu adkayd intii aan socday shirkan. Waxaa sidoo kale naloo qaaday inaan booqano tuulooyinka dhaqameedka Maya oo aan aragno Ahraamtooda cajiibka ah, qaarkood ilaa 3000 sano jir. Xoghaynta Shirarkii Nobel waxay ina xusuusisay Axdigii Dunida, oo ay soo saareen Naadiga Rome, oo aan ugu yaraan ahayn Madaxweyne Gorbachev, Maurice Strong iyo Duqa Federico oo ka kala socda UNEP iyo UNESCO siday u kala horreeyaan. Axdiga Dunida wuxuu soo bandhigayaa mabaadi'da aasaasiga u ah bulsho caalami ah oo caddaalad, waarta oo nabad ah. Waa inay sii wadaa inay na dhiirigeliso.
Mexico waxay safka hore kaga jirtay hub ka dhigista Nukliyeerka. Diblomaasiga reer Mexico Alfonso Garcia Robles ayaa helay abaalmarinta Nobel Peace Prize sanadkii 1982 dadaalkii hub ka dhigista ee uu la galay Alva Myrdal. Wuxuu ka mid ahaa dadkii bilaabay heshiiskii Tlateloco sanadkii 1967 ee ka aasaasay Latin America iyo Kariibiyaanka aag ka caaggan hubka nukliyeerka. Mudane Robles ayaa labadaba loo mahadceliyey lana sharfay intii kulanku socday. Iyo sida ay u fiicneyd in la joogo aag ka caaggan hubka nukliyeerka! Badbaadadeena, meeraha sidan oo kale waa inuu si deg deg ah u noqdaa mid ka madax banaan hubka nukliyeerka. Mexico sidoo kale waxay martigalisay shirkii labaad ee shirarkii waaweynaa ee looga hadlay cawaaqib xumada bini'aadanimo ee adeegsiga hubka nukliyeerka. Kulankii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Oslo kii ugu dambeeyayna wuxuu ka dhacay magaalada Vienna bishii Diseembar 2014, kaasoo horseeday heshiiskii UN-ka ee Mamnuucidda Hubka Nukliyeerka. Halganka hub ka dhigista nukliyeerka ayaa wali udub dhexaad u ah shaqada Soo-koobistii Nobel. Bayaan gaar ah ayaa la isku raacay oo qayb ahaan lagu daray bayaanka Merida ee ugu dambeeya. Kuwa abaalmarinta Nobel bixiya waxay ku boorinayaan dawladaha inay saxeexaan oo ay ansixiyaan heshiiska Qaramada Midoobay.
Heerka rabshaddu wuu ka hooseeyaa Yucatan marka loo eego waddanka intiisa kale, laakiin weli aad buu u sarreeyaa, gaar ahaan rabshadaha ka dhanka ah haweenka. Yucatan, sida waddanka iyo gobolka weyn, wuxuu sidoo kale la halgamayaa faqri, sinnaan la'aan, shaqo la'aan iyo nidaam caafimaad oo aan ku filnayn. Gudoomiyaha Yucatan, Mauricio Vila Dosal, wuxuu sameeyay balanqaadyo ah inuu xoojiyo dadaalkiisa nabadeed, isagoo umuuqda mid lahadal iyo xamaasad weyn. Sidoo kale, Madaxweynaha Mexico, Manuel Lopez Obrador, ayaa ku sharfay kulanka joogitaankiisa. Waxaa la xasuusiyey sida ay uga go'an tahay inuu dhiso guddi ka shaqeeya ka hortagga rabshadaha. Waxaan kulan miro dhal ah la yeeshay Wasiirka Waxbarashada iyo wasiirka Haweenka ee Yucatan iyo shaqaalahooda oo ay weheliyaan Kailash Satyarthi, oo ku guuleystay Nobel Peace Prize sanadkii 2014 isaga iyo Malala Yousafzai. Waxaan fahan wanaagsan ka helnay caqabadaha nidaamka iskuulka, ugu yaraan la xiriirta rabshadaha jinsiga iyo uurka ee gabdhaha iskuulka. Dhammaantood waxaa lagu wadaa inay ka bilaabaan waxbarashada nabadda heerarka kala duwan ee nidaamka dugsiga. Waxay xiiseynayeen tusaale ahaan qalabyada caadiga ah ee khuseeya UNESCO, Mashruuca Iskuullada Isku-xidhka ee UNESCO iyo mashruuca bulshada rayidka ah. Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda, oo laga soo saaray Baaqii Nabadda ee Hague.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaa loo maleynayay inay sii kordheyso muhiim inay ka qaybgasho dhalinyarada wadahadal lala yeesho Abaalmarinta Nabadda ee Nobel. Sannadkan qaar ka mid ah ardayda iyo macallimiinta 1200 ayaa ka qaybgalay, badhkoodna waxay ka yimaadeen Mexico iyo badhka kalena waxay ka yimaadeen dalal kala duwan. Ardaydu waxay joogeen kalfadhiyadii loo dhanyahay waxayna abaabuleen sheybaarro nabadeed iyo aqoon isweydaarsiyo si ay aqoontooda ugu sii qoto dheereeyaan Waxaan la kulmay ardayda labada gole ee loo dhan yahay oo aan ka qaybqaatay hub ka dhigista nukliyeerka iyo waxbarashada nabadda, Jacaylka awooda ama awooda jacaylka. Aniguna waxaan ku darsaday aqoon isweydaarsi ku saabsan khatarta nukliyeerka, oo ay weheliyaan Doonta Nabadda. Ardaydu waxay kaloo soo saareen bayaankooda Dhallinyarada. Ardayda iyo abaalmarinta Nobel-ba labaduba waxay taageereen shaqo joojinta Dugsiga Jimcaha ee deegaanka - iyo mustaqbalka. Iyada oo ku saleysan shaqada diyaargarowga ee ay qabatay IPB, waxaan ku yeeshay "kulanka istiraatiijiyadda isbeddelka istaraatiijiga ah" ee ku saabsan nabadda iyo tikniyoolajiyadda oo ay soo wada qabteen Scott Cunningham iyo Lisa Short. Bayaanka howlgalka waxaa lagu soo saaray aragtida ah in la horumariyo “is-weydaarsiga saamiga bulshada ee saamaynta bulshada” si gacan looga geysto kordhinta codadka cawska-xididka u ah nabadda, waxaan rajeynayaa, in lagu soo bandhigo Shirka Nobel ee soo socda
Maalintii ugu dambeysay Shirka, dhowr abaalmarin ayaa la bixiyey. Abaalmarinta Shirka Nabadda wuxuu u tegey heesaaga iyo wanaag-sameeyaha Ricky Martin, oo ugu jawaabey show aad u kulul. Daabacaadda sanadkan ee abaalmarinta Nobel, Ahaanshaha Nobel, oo ay soo saartay Livia Malcangio oo ka tirsan Xoghaynta Joogtada ah ee Shirka ayaa la siiyay qof walba. Xogheynta oo dhan, iyo ugu yaraan madaxweynaha, Ekaterina Zagladina, waxay mudan tahay amaan badan in ay abaabushay shir kale oo weyn oo guuleystey. Waxaan uga tagay aqoon cusub iyo dhiirigalin cusub si aan usii wado shaqada nabada, sikastaba rajo la'aan way dareemi kartaa waqti ka waqti. Waxaan rajeyneynaa, cadeynta ugu dambeysa iyo dhiirigelinta xoogan ee ah in la dhiso dhaqan nabadeed labaduba waxtar ayey u yeelan doonaan kuwa aan joogin Merida.
Sigerfjord, Norway, Oktoobar 2019
Magacaabista abaalmarinta nabadda ee Nobel ee loogu talagalay dugsiyada jabiya caqabadaha Waqooyiga Ireland
June 24, 2019 Warbixinnada Waxqabadka 0
Raadinta nabadda manhajka qaran ee Mexico
July 14, 2019 Siyaasadda, Research 1
Isticmaalka falanqaynta nuxurka, daraasadani waxay qiimeyneysaa manhajka qaran ee Mexico saddex qaybood oo laga helo barnaamijyada waxbarashada nabadda: garashada rabshadaha; wax ka qabashada khilaafka si aan rabshad lahayn; iyo abuurista xaaladaha nabada wanaagsan. [sii wad akhriska…]
Waxbarista Ku Saabsan Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee ELT
July 25, 2020 CV 0
Macallimiinta ku saleysan waxyaabaha, waxay caqabad ku noqon kartaa in la helo mowduucyo wanaagsan oo dunida dhabta ah oo ku dhaqma xirfadaha luqadda Ingiriisiga isla markaana ku dhiirrigeliya ardayda sheekooyinka dadka u shaqeeyay mustaqbal wanaagsan. Mid ka mid ah mowduucyada noocaas ah ayaa ah Abaalmarinta Nabadda ee Nobel. [sii wad akhriska…]
Guul Farxad wuxuu leeyahay,
December 20, 2019 at 8: 25 pm
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helo boggan oo aan indhahayga u qaado xagga garoon sare oo lagu ciyaaro. Waxaan jeclaan lahaa in dugsiyadeena maxalliga ahi ay la xiriiraan shaqada weyn ee aad dhiirrigelinayso. Haddii qof ka mid ah dugsiyadu la soo xiriiri karo https://www.pullmanschools.org/ si loo abuuro khibrad iskuul walaasheed, waan ku farxi lahaa inaan gacan siiyo.